Talo: Qaabka akhriska iyo Cashar qaadasahada?
wxn salaamayaa dhmn dadka xubin ka ah forum kan a scm .wxn ahay araday medicine ka barta addis ababa ,wxn hada bilaabay pc1 markaas wxn jeclaan lahaa qof soo dhigtay iskuul caafimaad inuu talo iga siiyo qaabka akhriska iyo cashar qaadashada .
Qaab gooni ah oo wax loo akhristo oo qof walba anafacayso ma jirto laakiin waxay ku xiran tahay qofka dabcigiisa iyo waqtigiisa siduu u maaraysto iyo qaabka ugu sahlan ee wax u fahmi karo iyo waqtiyada wax akhriska ay u sahlan tahaya am fahanka qofka uu fiican yahay.
Haddii ay jiraan cillado kaa heysto qaabka wax akhrinta waad noo sheegi kartaa si aan kaaga siino talooyin, adigoo noo faahfaahiya sida waqtigaaga maalmeed uu u habaysan yahay.
asc all saxaabta pagekaaan bacdu salaan waxaan rawaa inaan ka talo bixiyo wax aqriska hadi aad malinki afar sac wax aqriso wey kugu filan tahay waxaadne ka dhigataa afarta sac galabki lawo sac habenkina labo sac